သင့် Android Device ကို ပြန်မရောင်းခင် ဘာတွေသိထားရမလဲ – ADS Myanmar Blog
သင့် Android Device ကို ပြန်မရောင်းခင် ဘာတွေသိထားရမလဲ
Android device တစ်လုံးကို ပြန်ရောင်းဖို့ဆိုတာဟာ တကယ့်ကို လွယ်ကူတဲ့အလုပ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တ ကယ်တမ်း သူများလက်ထဲ မထည့်လိုက်သေးခင် သတိထားရမယ့် အဆင့်အနည်းငယ်တော့ ရှိပါတယ်။ အရေးကြီးတာက တော့ data တွေကို back up လုပ်ထားပြီး သူများလက်ထဲမထည့်ခင် ဖုန်းထဲက data တွေကို ဖျက်ပစ်ဖို့ပါ။
ပြဿနာက လောကကြီးမှာ လူကောင်းတွေပဲ ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ လူဆိုးတွေလည်း ရှိတာပါပဲ။ သူတို့တွေက ဈေးပေါတဲ့ တပတ်ရစ်ဖုန်းတစ်လုံးကို ဝယ်ပြီး သူများတွေကို ဒုက္ခပေးတာမျိုး လုပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ကြပြန်တော့လည်း သူများကို ဒုက္ခ ပေးချင်တာမဟုတ်ပေမယ့် မတော်တဆ ဖြစ်သွားတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း တွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဖုန်းတစ်လုံးကို တစ်ပတ်ရစ်ဈေးကွက်ထဲမှာ ပြန်ရောင်းတော့မယ်ဆိုရင် ကြိုတင်ပြုလုပ်သင့် တဲ့ အချက် ၅ ချက်ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
၁. Data တွေကို Back up လုပ်ပါ။
ဖုန်းက data တွေကို နောက်ဖုန်းတစ်လုံးကို ပြောင်းဖို့ နည်းလမ်း ၃ ခုလောက် ရှိပါတယ်။ ပထမက ကွန်ပျူတာထဲကို ပြောင်း ထည့်တာပါ။ ဒုတိယက ဖုန်းအချင်းချင်းပြောင်းထည့်တာပါ။ တတိယကတော့ Cloud မှာ အရင် back up လုပ်ပြီး၊ နောက် ဖုန်းထဲကနေ ပြန်ဆွဲတဲ့နည်းပါ။ အားလုံးထဲမှာ အလွယ်ဆုံးကတော့ ဖုန်းအချင်းချင်း ကူးတာပါပဲ။ Android 5.0 နဲ့ အထက် ရှိ တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင် လုပ်ရတာ အရမ်းကို လွယ်သွားပါတယ်။
တကယ်လို့ ကြားခံကနေ ကူးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းရဲ့ SD ကတ် ကို ဖြုတ်ပြီး၊ ကွန်ပျူတာထဲ ထည့်ပေးပြီးတော့ back up လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် MicroUSB cable လိုပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Google Account နဲ့ Synced လုပ်ထား မယ်ဆိုရင် contacts တွေကို အလိုလို synced လုပ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ back up ကို အပြည့်အဝလုပ်ချင်တယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ နဂို OS ပုံစံအတိုင်း အတိအကျပြန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Titanium Launcher တို့၊ Carbon တို့လို app မျိုးတွေ ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
၂. SIM card တွေ၊ MicroSD card တွေကို ထုတ်ပါ။
ဒါကတော့ အားလုံးလိုလို လုပ်ဖြစ်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေ မေ့သွားတာတို့၊ ယောင်ပြီးပါသွားတာတို့ ကြုံ ရတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ SD card ကို ပါထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ card တစ်ခုလုံးကို ကွန်ပျူတာနဲ့ format ချပေး လိုက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
၃. ဖုန်းကို Factory Reset ချပါ။
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ data တွေအားလုံး အကုန်အစင်ပျက်သွားဖို့ဆိုရင် factory data reset လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက ဒါလုပ်ပြီးရင် ပြန်ပြင်လို့ မရတော့ပါဘူး။ data တွေ ပြန်မရနိုင်တော့ဘူး။ ဖုန်းကို factory data reset လုပ်မယ် ဆိုရင်၊ Settings>Backup & reset>Factory data reset ကို သွားရပါမယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ PIN ကို ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့၊ ဖုန်း က မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ စက်ရုံကထုတ်လိုက်တဲ့အတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒါက SDcard ထဲက data တွေကိုတော့ ဖျက်မပစ်ပါဘူး။
၄. Accessories တွေကို ပြန်ထည့်ပေးပါ။
ဖုန်းကိုဝယ်လိုက်တုန်းက ပါလာတဲ့ ဗူးတို့၊ အားသွင်းကြိုး၊ နားကြပ်၊ charger တို့ ပြန်ထည့်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် သင့်ဖုန်းကို ဈေး ကောင်းကောင်းနဲ့ မြန်မြန်ပြန်ရောင်းလို့ရနိုင်ပါမယ်။ တကယ်လို့ ဒီဖုန်းနဲ့ပဲ သုံးနိုင်မယ့် ဘက်ထရီအပိုတွေ၊ အားသွင်းကြိုးတွေ၊ အပေါ်က ကာဗာတွေနဲ့ screen guard တွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် ထည့်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးဆိုရင် ဝယ်တဲ့သူတွေက ပို သဘောကျတတ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အာမခံသက်တမ်းကျန်သေးရင်လည်း ဘယ်လောက်ကျန်သေးတယ်ဆိုတာကို ပြော ပြီး၊ ဝယ်ထားတဲ့ ဘောင်ချာနဲ့အတူတူ ပြန်ထည့်ရောင်းနိုင်မှာပါ။
ဒါကအရေးကြီးတဲ့ အဆင့်တစ်ခုပါ။ Device ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားပေးတာက ဝယ်သူအနေနဲ့ အမြင်ကောင်းသွားစေသ လို၊ ဒီပစ္စည်းကို ကိုင်တဲ့သူက သပ်ရပ်တဲ့သူလို့ သူတို့ကို ထင်သွားစေပါတယ်။ Screen ပေါ်မှာ အစွန်းတွေ၊ လက်ဗွေတွေ ရှိ မနေအောင် ရှင်းထားဖို့လိုသလို၊ ဖုန်းမှာလည်း ချေးတွေကပ်နေတာ၊ ဖုန်တွေဝင်နေတာမျိုးတွေ မဖြစ်အောင် သန့်ရှင်းထား သင့်ပါတယ်။ ဝယ်တဲ့သူက လာတော့မယ်ဆိုရင် ဖုန်းကို အားသွင်းပေးထားတာ ကောင်းပါတယ်။ လုံးဝအားကုန်လို့ ဖွင့်မရ ဖြစ်နေတာမျိုးကို ရှောင်ရှားတဲ့အနေနဲ့ပါ။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းကို တပတ်ရစ်ဈေးကွက်မှာ ပြန်ရောင်းချင်သူတွေအနေနဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုရှိစွာ ရောင်းချနိုင် ပြီလို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ အဓိကသတိထားရမှာက တပတ်ရစ်ဈေးကွက်မှာ ဖုန်းတွေရောင်းမယ်ဆိုရင် ကိုယ့် data တွေကို အခြားသူတွေလက်ထဲ ရောက်မသွားစေဖို့နဲ့၊ ပြန်ရောင်းရာမှာ ဈေးကောင်းကောင်းရနိုင်ဖို့အတွက် Accessories တွေနဲ့ ဖုန်းရဲ့ အသွင်အပြင်ကို ကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။
သင့်ရဲ့ Android ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ tablet ပဲဖြစ်ဖြစ် ပြန်ရောင်းချင်တယ်ဆိုရင်
Android device ​တဈ​လုံး​ကို ​ပွနျ​ရောငျး​ဖို့​ဆို​တာ​ဟာ ​တ​ကယျ့​ကို ​လှယျ​ကူ​တဲ့​အ​လုပျ​လို့ ​ပွော​လို့​ရ​ပါ​တယျ။ ​ဒါ​ပေ​မယျ့ ​တ ​ကယျ​တမျး ​သူ​မြား​လကျ​ထဲ ​မ​ထညျ့​လိုကျ​သေး​ခငျ ​သ​တိ​ထား​ရ​မယျ့ ​အ​ဆငျ့​အ​နညျး​ငယျ​တော့ ​ရှိ​ပါ​တယျ။ ​အ​ရေး​ကွီး​တာ​က ​တော့ data ​တှေ​ကို back up ​လုပျ​ထား​ပွီး ​သူ​မြား​လကျ​ထဲ​မ​ထညျ့​ခငျ ​ဖုနျး​ထဲ​က data ​တှေ​ကို ​ဖကျြ​ပဈ​ဖို့​ပါ။
​ပွ​ဿ​နာ​က ​လော​က​ကွီး​မှာ ​လူ​ကောငျး​တှေ​ပဲ ​ရှိ​နေ​တာ​မ​ဟုတျ​ပါ​ဘူး။ ​လူ​ဆိုး​တှေ​လညျး ​ရှိ​တာ​ပါ​ပဲ။ ​သူ​တို့​တှေ​က ​ဈေး​ပေါ​တဲ့ ​တ​ပတျ​ရဈ​ဖုနျး​တဈ​လုံး​ကို ​ဝယျ​ပွီး ​သူ​မြား​တှေ​ကို ​ဒု​က်ခ​ပေး​တာ​မြိုး ​လုပျ​နိုငျ​ပါ​တယျ။ ​တဈ​ခြို့​ကွ​ပွနျ​တော့​လညျး ​သူ​မြား​ကို ​ဒု​က်ခ ​ပေး​ခငျြ​တာ​မ​ဟုတျ​ပေ​မယျ့ ​မ​တျော​တ​ဆ ​ဖွဈ​သှား​တာ​မြိုး ​ဖွဈ​တတျ​ပါ​တယျ။ ​ဒီ​လို​မ​ဖွဈ​အောငျ ​ကာ​ကှယျ​ပေး​နိုငျ​တဲ့ ​နညျး​လမျး ​တှေ​ရှိ​ပါ​တယျ။ ​ဒါ​ကွောငျ့ ​ကိုယျ့​ဖုနျး​တဈ​လုံး​ကို ​တဈ​ပတျ​ရဈ​ဈေး​ကှကျ​ထဲ​မှာ ​ပွနျ​ရောငျး​တော့​မယျ​ဆို​ရငျ ​ကွို​တငျ​ပွု​လုပျ​သငျ့ ​တဲ့ ​အ​ခကျြ ၅ ​ခကျြ​ကို ​ဖျော​ပွ​ပေး​လိုကျ​ပါ​တယျ။
၁. Data ​တှေ​ကို Back up ​လုပျ​ပါ။
​ဖုနျး​က data ​တှေ​ကို ​နောကျ​ဖုနျး​တဈ​လုံး​ကို ​ပွောငျး​ဖို့ ​နညျး​လမျး ၃ ​ခု​လောကျ ​ရှိ​ပါ​တယျ။ ​ပ​ထ​မ​က ​ကှနျ​ပြူ​တာ​ထဲ​ကို ​ပွောငျး ​ထညျ့​တာ​ပါ။ ​ဒု​တိ​ယ​က ​ဖုနျး​အ​ခငျြး​ခငျြး​ပွောငျး​ထညျ့​တာ​ပါ။ ​တ​တိ​ယ​က​တော့ Cloud ​မှာ ​အ​ရငျ back up ​လုပျ​ပွီး၊ ​နောကျ ​ဖုနျး​ထဲ​က​နေ ​ပွနျ​ဆှဲ​တဲ့​နညျး​ပါ။ ​အား​လုံး​ထဲ​မှာ ​အ​လှယျ​ဆုံး​က​တော့ ​ဖုနျး​အ​ခငျြး​ခငျြး ​ကူး​တာ​ပါ​ပဲ။ Android 5.0 ​နဲ့ ​အ​ထကျ ​ရှိ ​တဲ့​ဖုနျး​တှေ​ဆို​ရငျ ​လုပျ​ရ​တာ ​အ​ရမျး​ကို ​လှယျ​သှား​ပါ​တယျ။
​တ​ကယျ​လို့ ​ကွား​ခံ​က​နေ ​ကူး​မယျ​ဆို​ရငျ​တော့ ​ဖုနျး​ရဲ့ SD ​ကတျ ​ကို ​ဖွုတျ​ပွီး၊ ​ကှနျ​ပြူ​တာ​ထဲ ​ထညျ့​ပေး​ပွီး​တော့ back up ​လုပျ​နိုငျ​ပါ​တယျ။ ​အဲ​ဒီ​အ​တှကျ MicroUSB cable ​လို​ပါ​တယျ။ ​ပုံ​မှနျ​အား​ဖွငျ့​တော့ Google Account ​နဲ့ Synced ​လုပျ​ထား ​မယျ​ဆို​ရငျ contacts ​တှေ​ကို ​အ​လို​လို synced ​လုပျ​ပေး​မှာ ​ဖွဈ​ပါ​တယျ။ ​တ​ကယျ​လို့ back up ​ကို ​အ​ပွညျ့​အ​ဝ​လုပျ​ခငျြ​တယျ၊ ​ကိုယျ့​ရဲ့ ​န​ဂို OS ​ပုံ​စံ​အ​တိုငျး ​အ​တိ​အ​ကြ​ပွနျ​လို​ခငျြ​တယျ​ဆို​ရငျ​တော့ Titanium Launcher ​တို့၊ Carbon ​တို့​လို app ​မြိုး​တှေ ​ကို ​အ​သုံး​ပွု​နိုငျ​မှာ​ပါ။
၂. SIM card ​တှေ၊ MicroSD card ​တှေ​ကို ​ထုတျ​ပါ။
​ဒါ​က​တော့ ​အား​လုံး​လို​လို ​လုပျ​ဖွဈ​ကွ​မယျ​ထငျ​ပါ​တယျ။ ​ဒါ​ပေ​မယျ့ ​တဈ​ခါ​တ​လေ ​မေ့​သှား​တာ​တို့၊ ​ယောငျ​ပွီး​ပါ​သှား​တာ​တို့ ​ကွုံ ​ရ​တတျ​ပါ​တယျ။ ​တ​ကယျ​လို့ SD card ​ကို ​ပါ​ထညျ့​ပေး​လိုကျ​မယျ​ဆို​ရငျ​တော့ card ​တဈ​ခု​လုံး​ကို ​ကှနျ​ပြူ​တာ​နဲ့ format ​ခြ​ပေး ​လိုကျ​ဖို့ ​လို​ပါ​လိမျ့​မယျ။
၃. ​ဖုနျး​ကို Factory Reset ​ခြ​ပါ။
​ဖုနျး​ထဲ​မှာ​ရှိ​တဲ့ data ​တှေ​အား​လုံး ​အ​ကုနျ​အ​စငျ​ပကျြ​သှား​ဖို့​ဆို​ရငျ factory data reset ​လုပျ​ပေး​ဖို့​လို​ပါ​တယျ။ ​ဒါ​ပေ​မယျ့ ​ပွ​ဿ​နာ​က ​ဒါ​လုပျ​ပွီး​ရငျ ​ပွနျ​ပွငျ​လို့ ​မ​ရ​တော့​ပါ​ဘူး။ data ​တှေ ​ပွနျ​မ​ရ​နိုငျ​တော့​ဘူး။ ​ဖုနျး​ကို factory data reset ​လုပျ​မယျ ​ဆို​ရငျ၊ Settings>Backup & reset>Factory data reset ​ကို ​သှား​ရ​ပါ​မယျ။ ​ကိုယျ့​ရဲ့ PIN ​ကို ​ထညျ့​လိုကျ​ပွီ​ဆို​တာ​နဲ့၊ ​ဖုနျး ​က ​မိ​နဈ​အ​နညျး​ငယျ​အ​တှငျး​မှာ ​စကျ​ရုံ​က​ထုတျ​လိုကျ​တဲ့​အ​တိုငျး ​ပွနျ​ဖွဈ​သှား​မှာ​ပါ။ ​ဒါ​က SDcard ​ထဲ​က data ​တှေ​ကို​တော့ ​ဖကျြ​မ​ပဈ​ပါ​ဘူး။
၄. Accessories ​တှေ​ကို ​ပွနျ​ထညျ့​ပေး​ပါ။
​ဖုနျး​ကို​ဝယျ​လိုကျ​တုနျး​က ​ပါ​လာ​တဲ့ ​ဗူး​တို့၊ ​အား​သှငျး​ကွိုး၊ ​နား​ကွပျ၊ charger ​တို့ ​ပွနျ​ထညျ့​ပေး​နိုငျ​မယျ​ဆို​ရငျ ​သငျ့​ဖုနျး​ကို ​ဈေး ​ကောငျး​ကောငျး​နဲ့ ​မွနျ​မွနျ​ပွနျ​ရောငျး​လို့​ရ​နိုငျ​ပါ​မယျ။ ​တ​ကယျ​လို့ ​ဒီ​ဖုနျး​နဲ့​ပဲ ​သုံး​နိုငျ​မယျ့ ​ဘကျ​ထ​ရီ​အ​ပို​တှေ၊ ​အား​သှငျး​ကွိုး​တှေ၊ ​အ​ပျေါ​က ​ကာ​ဗာ​တှေ​နဲ့ screen guard ​တှေ ​ရှိ​နေ​သေး​တယျ​ဆို​ရငျ ​ထညျ့​ရောငျး​နိုငျ​ပါ​တယျ။ ​ဒါ​မြိုး​ဆို​ရငျ ​ဝယျ​တဲ့​သူ​တှေ​က ​ပို ​သ​ဘော​ကြ​တတျ​ပါ​တယျ။ ​တ​ကယျ​လို့ ​အာ​မ​ခံ​သကျ​တမျး​ကနျြ​သေး​ရငျ​လညျး ​ဘယျ​လောကျ​ကနျြ​သေး​တယျ​ဆို​တာ​ကို ​ပွော ​ပွီး၊ ​ဝယျ​ထား​တဲ့ ​ဘောငျ​ခြာ​နဲ့​အ​တူ​တူ ​ပွနျ​ထညျ့​ရောငျး​နိုငျ​မှာ​ပါ။
​ဒါ​က​အ​ရေး​ကွီး​တဲ့ ​အ​ဆငျ့​တဈ​ခု​ပါ။ Device ​ကို ​သနျ့​သနျ့​ရှငျး​ရှငျး ​ထား​ပေး​တာ​က ​ဝယျ​သူ​အ​နေ​နဲ့ ​အ​မွငျ​ကောငျး​သှား​စေ​သ ​လို၊ ​ဒီ​ပ​စ်စညျး​ကို ​ကိုငျ​တဲ့​သူ​က ​သပျ​ရပျ​တဲ့​သူ​လို့ ​သူ​တို့​ကို ​ထငျ​သှား​စေ​ပါ​တယျ။ Screen ​ပျေါ​မှာ ​အ​စှနျး​တှေ၊ ​လကျ​ဗှေ​တှေ ​ရှိ ​မ​နေ​အောငျ ​ရှငျး​ထား​ဖို့​လို​သ​လို၊ ​ဖုနျး​မှာ​လညျး ​ခြေး​တှေ​ကပျ​နေ​တာ၊ ​ဖုနျ​တှေ​ဝငျ​နေ​တာ​မြိုး​တှေ ​မ​ဖွဈ​အောငျ ​သနျ့​ရှငျး​ထား ​သငျ့​ပါ​တယျ။ ​ဝယျ​တဲ့​သူ​က ​လာ​တော့​မယျ​ဆို​ရငျ ​ဖုနျး​ကို ​အား​သှငျး​ပေး​ထား​တာ ​ကောငျး​ပါ​တယျ။ ​လုံး​ဝ​အား​ကုနျ​လို့ ​ဖှငျ့​မ​ရ ​ဖွဈ​နေ​တာ​မြိုး​ကို ​ရှောငျ​ရှား​တဲ့​အ​နေ​နဲ့​ပါ။
​ဒီ​လောကျ​ဆို​ရငျ​တော့ ​ကိုယျ့​ရဲ့​ဖုနျး​ကို ​တ​ပတျ​ရဈ​ဈေး​ကှကျ​မှာ ​ပွနျ​ရောငျး​ခငျြ​သူ​တှေ​အ​နေ​နဲ့ ​လုံ​ခွုံ​စိတျ​ခြ​မှု​ရှိ​စှာ ​ရောငျး​ခြ​နိုငျ ​ပွီ​လို့ ​မြှျော​လငျ့​ရ​ပါ​တယျ။ ​အ​ဓိ​က​သ​တိ​ထား​ရ​မှာ​က ​တ​ပတျ​ရဈ​ဈေး​ကှကျ​မှာ ​ဖုနျး​တှေ​ရောငျး​မယျ​ဆို​ရငျ ​ကိုယျ့ data ​တှေ​ကို ​အ​ခွား​သူ​တှေ​လကျ​ထဲ ​ရောကျ​မ​သှား​စေ​ဖို့​နဲ့၊ ​ပွနျ​ရောငျး​ရာ​မှာ ​ဈေး​ကောငျး​ကောငျး​ရ​နိုငျ​ဖို့​အ​တှကျ Accessories ​တှေ​နဲ့ ​ဖုနျး​ရဲ့ ​အ​သှငျ​အ​ပွငျ​ကို ​ကောငျး​အောငျ​လုပျ​ဖို့ ​လို​တယျ​ဆို​တာ​ပါ​ပဲ။
​သငျ့​ရဲ့ Android ​ဖုနျး​ပဲ​ဖွဈ​ဖွဈ၊ tablet ​ပဲ​ဖွဈ​ဖွဈ ​ပွနျ​ရောငျး​ခငျြ​တယျ​ဆို​ရငျ
Author Si GeePosted on November 5, 2015 November 17, 2015 Categories Ads, Ads.com.mmTags Ads, Ads.com.mm, Android, Android phone, smartphone, things to know, things to know before you sell your smartphone, used smartphone
Previous Previous post: www.ads.com.mm ၏ သိကောင်းစရာအချက်များ
Next Next post: အနာဂတ်စီးပွားရေး အစီအမံတွေကို စဉ်းစားဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု